ShweMinThar: လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ အခြေခံ
1. Genital Warts (HPV) လိင်အင်္ဂါ-ကြွက်နို့
လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတချို့က လိင်ဆက်ဆံမှုမရှိဘဲလဲ ကူးနိုင်တယ်။ အရေပြားချင်းထိတာနဲ့ ကူးတာတွေရှိတယ်။ ကြွက်နို့လဲ ပါတယ်။ တချို့က အရေးမကြီးပေမဲ့ တချို့က ကင်ဆာ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ကာကွယ်ဆေးရှိပါတယ်။
2. Crabs (Pubic Lice) သန်း
Parasites (ပါရာဆိုက်) ခေါ်တယ်။ Pubic hair ဆီးစပ်မွှေးမှာလဲ ဆံပင်တွေမှာလို သန်းတွေ ရှိနိုင်တယ်။ ပုံစံမတူတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် Crabs ခေါ်တယ်။ ယားမယ်။ ဥတွေအုချတယ်။ ပွါးမယ်။ ကူးမယ်။
3. Scabies ဝဲ (ယားနာ)
Mite ခေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ STD ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ ယားမယ်။ နီရဲလာမယ်။ ကူးမယ်။
4. Ring worm ပွေး
တခြားနေရာက ပွေးလဲ ဆီးစပ်နေရာတဝှိုက်မှာဖြစ်နေရင် တယောက်ကနေ တယောက်ကူးမယ်။
5. The Clap (Gonorrhea) (ဂနိုရီးယား)
ဆီးသွားရင် ပူမယ်။ နာမယ်။ အရည်တမျိုးဆင်းမယ်။ နောက်ပိုင်းရောက်ရင် နီရဲလာမယ်။ အဆစ်၊ အရိုးတွေကိုကူးမယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ ကျားအစိတွေ ရောင်မယ်။ အမျိုးသမီးတွေ အဖြူစတာတွေ ဆင်းမယ်။ ဆီးစပ်၊ ဗိုက်နာမယ်။ ကြားရက် သွေးဆင်းနိုင်တယ်။
6. Syphilis (ဆစ်ဖလစ်)
ဖြစ်ကာစ မသိကြဘူး။ ဆေးမကုရင် ဆိုးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆေးကုရတာ မခက်ပါ။ မနာတဲ့အနာ ပေါက်လာတယ်။ အနာနဲ့ထိသူကို ကူးမယ်။ တခြားနေရာတွေကို ပြန့်မယ်။ နှလုံး၊ ဦးနှောက်၊ မျက်စ်၊ အာရုံကြောတွေဆီ ရောက်နိုင်တယ်။
7. Chlamydia (ကလာမိုင်ဒီးယား)
အဖြစ်များတယ်။ ကလေးမရတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဆေးကုလို့လွယ်တယ်။ လည်ချာင်း၊ အစာဟောင်းအိမ်တွေကို ပြန့်နိုင်တယ်။ ယောက်ျားဖြစ်ရင် လိင်အင်္ဂါနာမယ်။ တခုခုဆင်းမယ်။ ဆီးအောင့်မယ်။ မိန်းမဖြစ်ရင် တခုခုဆင်းမယ်။ ယားမယ်။ အနံ့ဆိုးတယ်။ ဆက်ဆံမှုပြုရင်လဲနာမယ်။ ဆီးအောင့်မယ်။
8. Herpes Simplex Virus Type 1 လိင်လမ်း-ရေယုံ အမျိုးအစား (၁)
ပါးစပ်နှုတ်ခမ်းမှာ နာတဲ့အနာလေးတွေဖြစ်မယ်။ STD မဟုတ်တာများတယ်။ အပူကန်တာလို့ မြန်မာတွေကခေါ်ပြီး သူများတွေက Cold sores ခေါ်တယ်။ ပြောင်းပြန်။
9. Herpes Simplex Virus Type2လိင်လမ်း-ရေယုံ အမျိုးအစား (၂)
လိင်လမ်းရေယုံ အစစ်ဖြစ်တယ်။ ကူးစက်တာလဲမြန်တယ်။ နိုင်တဲ့ဆေးမရှိပါ။ Antiviral drugs ဆေးတွေကတော့ သက်သာစေတယ်။
10. Hepatitis B အသဲရောင် (ဘီ)
အသဲကို တဖြေးဖြေးဖျက်ဆီးတယ်။ သွေးကနေလဲကူးတယ်။ ကိုယ်ကထွက်တဲ့အရည်တွေကနေလဲကူးတယ်။ မအေကနေ ကလေးကိုလဲကူးတယ်။ ဆေးထိုးအပ်ကနေလဲကူးတယ်။ ကာကွယ်ဆေးရှိတယ်။
11. HIV/AIDS ခုခံအားကျရောဂါ
ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ခုခံအားစနစ်ကို ဖျက်ဆီးတယ်။ လိင်၊ သွေးနဲ့ မိခင်-ကလေး ကူးစေနိုင်တယ်။ HIV/AIDS Tests စမ်းသပ်နည်းတွေနဲ့ စမ်းသပ်ပါ။
12. Trichomoniasis (ထရွိုင်ကိုမိုးနပ်စ်)
(ပါရာဆိုက်) ပါဘဲ။ ကုလို့လွယ်ပါတယ်။ ပိုးရှိနေမှန်း မသိသူကများတယ်။ မွေးလမ်းကနေ တခုခုဆင်းမယ်။ အဖြူ-အဝါ-အစိမ်း။ အနံ့ဆိုးတယ်။ ယားမယ်။ ဆက်ဆံရင်နာမယ်။ ဆီးအောင့်မယ်။ ဆီးပူမယ်။
13. Chancroid (ရှန်ကာရွိုက်)
(ဗက်တီးရီးယား) ကနေဖြစ်ကူးတယ်။ အနာဖြစ်မယ်။ ဆေးကုလို့လွယ်တယ်။ ယောက်ျား လိင်အင်္ဂါမှာ နာတဲ့ အကျိတ် ပေါ်မယ်။ ပြည်တည်လာမယ်။ တက်စေ့တွေရောင်မယ်။ အမျိုးသမီးလဲ အဲလိုဘဲ။
14. LGV (Lymphogranuloma Venereum) (လင်ဖိုဂရင်ညူလိုမား-ဗနီးရီးယမ်း)
Chlamydia (ကလာမိုင်ဒီးယား) တမျိုးကနေဖြစ်စေတယ်။ အနာဖြစ်မယ်။ ခေါင်းကိုက်၊ ဖျား၊ အားယုတ်၊ တက်စေ့တွေ ရောင်မယ်။ တခုခုဖြစ်ဖြစ် သွေးဖြစ်ဖြစ် ဆင်းမယ်။
15. Pelvic Inflammatory Disease (PID) တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါများရောင်ခြင်း
လိင်ကတဆင့်ကူးတာ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ Chlamydia နဲ့ Gonorrhea ကနေလဲဖြစ်စေတယ်။ အသေအခြာဆေးမကုရင် အမျိုးမီးမှာ ကလေးမရတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဗိုက်အောက်ပိုင်းနာနေမယ်။ ကိုယ်ပူမယ်။ ဆက်ဆံရင်နာမယ်။ ဆီးအောင့်မယ်။ ကြားရက် သွေးဆင်းမယ်။
• Preventing STDs ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
လိင်မဆက်ဆံဘဲနေပါလို့ပြောတာ အမှန်ဆုံးဘဲ။ လက်တွေ့မကျလို့ အကြံကောင်းပေးတာကို လိုက်နာပါ။ အဖေါ်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးပါ။ ဆေးစစ်ကြပါ။ (ကွန်ဒွမ်) အမြဲသုံးပါ။ လက္စဏာရှိရင် မြန်မြန် ထိထိရောက်ရောက်ဆေးကုပါ။
• The Limits of Condoms (ကွန်ဒွမ်) ကနေ အကုန်လုံးကို မကာကွယ်နိုင်
(ကွန်ဒွမ်) ကနေ Gonorrhea, Chlamydia, HIV နဲ့ Trichomoniasis တွေကိုတော့ ကောင်းကောင်း ကာကွယ်နိုင်တယ်။ Herpes, Syphilis နဲ့ Genital warts တွေကိုတော့ ကောင်းကောင်း မကာကွယ်နိုင်ပါ။ (ကွန်ဒွမ်) မဖုံးတာကိုတော့ မကာကွယ်နိုင်ပါ။ Crabs နဲ့ Scabies တွေကို လုံးဝမကာကွယ်နိုင်ပါ။
• STDs and Pregnancy ကိုယ်ဝန်နဲ့ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် အထူးသတိထားပါ။ စောမွေးတာ-ပျက်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အထဲကကလေးကို ထိခိုက်နိုင်တယ်။ အသေမွေးနိုင်တယ်။ အလေးချိန်မပြည့်ကလေး မွေးနိုင်တယ်။ ကလေးမှာ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်တွေ ရှိနိုင်တယ်။
• STDs Come Back ပြန်ဖြစ်တတ်သလား
အများစုရောဂါတွေက နောက်ထပ်ဖြစ်မှာကို ရောဂါပြီးသွားသလို မဖြစ်စေနိုင်ပါ။ Gonorrhea, Syphilis, Chlamydia နဲ့ Trichomoniasis တွေကို ဆေးကုရင် ရှိနေတာတွေ ကောင်းသွားမယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ်ဖြစ်တာကို နောက်တခါ ဆေးထပ်ကုရလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကဆေးကုပေမဲ့ အဖေါ်က ဆေးမကုရင် ပြန်ကူးလာမယ်။
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ (၈-၃-၂ဝ၁၂ )
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ - လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ အခြေခံ
Posted by Alex Aung at 10:38 AM